Ikwusa Yourzọ Gị toga nke Ọma | Martech Zone
Atinggwa Wayzọ Gị Successga nke Ọma
Fraịde, Machị 12, 2010 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Ellen Dunnigan
Ndị dọkịta na-awa ahụ ji uche na-akwado maka ịwa ahụ. Ndị na-agba ọsọ na-ejikere ejikere maka nnukwu egwuregwu. Gị onwe gị, mkpa ka psyched banyere gị ọzọ ohere, gị nnukwu ahịa oku ma ọ bụ ngosi ma.
Ịzụlite oké nkà nkwurịta okwu ga-eme ka ị dị iche na ndị ọzọ nke mkpọ. Chee echiche banyere nkà ndị ị chọrọ:
Usoro ndị na-ege ntị nke ọma - youmara n'ezie ihe onye ahịa gị chọrọ na gịnị kpatara ya? Gịnị bụ ihe mgbu ya? You nwere ike ịnụ ya n'ihe ọ na-ekwu na otu o si ekwu ya?
Tone-Isetịpụrụ Asụsụ - you mara mgbe o yiri onye ahịa gị ahu? Asụsụ ahụ gị ọ na-edozi ụda maka nkwukọrịta ka mma ma ọ bụ karịa na ndị ahịa gị?
Nanị ikike ziri ezi na ọnụego ikwu okwu - youzọ i si ekwu okwu ọ na - akpali ume na ime ihe n’aka onye ahịa gị? Ma ọ bụ ị na-ahụ onye ahịa gị ka ọ na-apụ na isiokwu ndị ọzọ ma ọ bụ na-agwụ ike na ngwaahịa / ọrụ gị? Ndi ahịa na- na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na-edozi ihe mgbu ya?
Ike, Nchịkwa Olu Na-ekwenye Ekwenye - sound na-ada ụda? Uda olu gi o na-eme ka obi ruo nd i mmad u ala ka ha na-akọrọ g i obi banyere ihe mgbu ha? Ka ị na-ada ụda, ụjọ, nhazi, nhazi, ụda, ma ọ bụ na-agwụ ike?
Already maraworị ozi ịchọrọ ka onye ahịa gị nụrụ. Nke ahụ bụ akụkụ dị mfe. Na agbanyeghị ugboro ole ị na-ekwu ụda 60 nke abụọ gị ma ọ bụ gabiga ihe ahịa gị, enwere ndị na-agaghị ejikọ na ozi ahụ; ha agaghị ekwe weta ya. Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na, n’ozuzu, ozi gị ga na-ada ụda mgbe ihe I kwuru na otu I si kwuo ya dakọtara.
OT ị na-ekwu na ozi gị na-eme ka ọdịiche dị iche
Ma enwere nka na nka. Tupu ị gawa oku ọzọ na-aga, chee echiche banyere mmetụta ịchọrọ ịhapụ onye ahịa gị; mmetụta uche ịchọrọ ịkọrọ. Iji maa atụ, chee na ịchọrọ ịmalite na ozi na-ekpo ọkụ, nke enyi ma soro ozi nwere obi ike, dị ike, ma ọ bụ nwee mmetụta.
Enwere ike igosipụta mmetụta ọ bụla ịchọrọ ikwu
Uche echiche ma ọ bụ ihe oyiyi
Kwekọ ahụ mmadụ
Kwadebe maka oku gị site n'ịhụ na ụdị nkwukọrịta gị (ya bụ) ka o kwekọọ na ozi gị. Iji malite na ozi na-ekpo ọkụ, nke enyi:
Chee echiche banyere okwu putara ihe nke n’eme ka obi di enyi gi di nro: obi di nwayo, obi iru ala, anwu anwu. Kwughachiri onwe gị otu okwu ahụ gbara ọkpụrụkpụ ugboro ugboro ruo mgbe ị nụrụ ya.
Jiri anya nke uche gị hụ ihe osise. Jiri anya nke uche gị hụ ịmakụ nwatakịrị ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ gị, na-etinye n'ime blanket n'akụkụ ebe a na-amụnye ọkụ, na-aga n'akụkụ osimiri na anwụ na-acha. Mee ka ihe osise ahụ doo anya.
Gbanwee ụda olu gị site na ịgbanwe ụda ahụ gị na itinye gị n'ọnọdụ. Mụmụọ ọnụ ọchị. Jiri ike kwuo okwu. Bugharịa. Mee ka mmegharị gị BIG.
Na-aga n'ihu n'ike na mmetụta:
Chee echiche banyere okwu gbara ọkpụrụkpụ na-akpali mmetụta nke ike na mmetụta: siri ike, kwụsie ike, nwee ntụkwasị obi
Were onwe gị otú ahụ. Cheedị echiche ịbụ onye na-ekwu akụkọ kachasị ukwuu, ma ọ bụ onye nkụzi kachasị ukwuu, onye ọchịagha na-eyi yunifọm, ỌKPARA ahụ na-agwa ndị na-ege ntị okwu na-ekwupụta okwu gị niile. Jiri anya nke uche gị hụ ka ị na-enye ozi ahụ ị chọrọ. Jiri anya gị hụ onwe gị dị jụụ, na-achịkwa ya, na mpaghara ahụ.
Isi Asụsụ: Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị ike ma nwee mmetụta, bilie. Ọnọdụ zuru oke. Jiri mmegharị aka dị ike. Ejela ọtụtụ ihe. Nọgide na-enwe anya dị mma. Elela ihe n'ime ụlọ; naanị ndị mmadụ. Mgbe ị na-ekwu okwu na ekwentị, ekwela ka anya gị na-awagharị. Were anya gị na foto nke onye… gwa ya okwu.
Tags: Chọọ Marketing
Mbupute Na Business onye nchoputa na onye isi oche Ellen Dunnigan bụ onye nchịkwa na-ahụ maka mba niile ma gosipụta ya na nkuzi pụrụ iche na olu, okwu, na mmezi Bekee. O nwere asambodo nke ukwu na Speech-Language Pathology ma gbaara ya akwụkwọ dịka onye tozuru etozu site na American Association of Speech-Language Hearing Association.